#OneCameroon2019: Camerooni uye Kongo zvinosvibisa - Tamban RELAY
HOME » mwe #OneCameroon2019: Camerooni uye Kongo zvinoshatisa
#OneCameroon2019: VaMameroni neCongo vanoderedza
Kutanga kubva kuCongo, maitiro aya ezvipfeko asvika kuCameroon uko kune vateveri vashoma.
Yepfeko yepamusoro yemafashoni, mhando yemhando yepamusoro, VIP shangu uye zvipfeko zvine mavara. Chero ruzivo rwunoverengeka. Kubva pane ngowani kusvika kune shangu kuburikidza nebhandi, kana iwe uri mupapuri, iwe unofanirwa kugara uri kumusoro. Kunyangwe mutengo, tinobhadhara. Izvi zvinonzi "sapper".
Aya akapfeka maitiro anobva kuCongo akakunda Cameroon uye anopfekwa nevamwe vatambi.
Mune sapology, ndiPapa Wemba weCameroon. Muimbi uye mutambi, JP anozivikanwa zviri nani pane zvipfeko zvake kupfuura zvaMakossa, uyo achiri kufadza. Iyo yakaiswa mataira eScotland, inguva yeganda shangu, Charlie Chaplin hat. Aya ndiwo maitiro ekuona iwo muimbi wekunakirwa kwakanaka. Zvese zvakabuditswa zvemuimbi mamirimita. Iye munyori wezita rekuti "Golgotha", anodawo mabhuru makuru nembatya dzembatya.
Sosaiti yeAmbiancers uye Stylish People (SAPE) imhando yezvipfeko zvinobva kuCongo (Republic of Congo uye Democratic Republic of Congo). Mapapiro, pfeka, pfeka macouturiers makuru, uye dzidzira iyo sapology. Iwo makuru mapapiro ndiye Kongo. Ivo vanoteverwa zvakanyanya neIvorians uye Nigerian. Izvo zvinodikanwa kuti mapapira apfeke zvakanaka. Kune vateveri vekupora chitendero.
Nyaya iyi yakatanga kutanga http://www.crtv.cm/2019/05/onecameroon2019-les-camerounais-et-la-sape-congolaise/
Chirungu cheChirungu: Chirwere cheChirungu: Cabral Libii inopa (zvakare) semurevereri
The SAT dambudziko rekupedzisira - New York Times